Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 24/10/2020)
Keydka dabiiciga ee Belluno waxaa lagu aasaasay 1990 si loo ilaaliyo dabeecada quruxda badan ee Dolomites. Waxay ku taal duleedka Dolomite ee waqooyiga Italy, Beerta dabeecadda Belluno waa mid soo jiidasho leh xilliga gu'ga. Buuraha cagaaran iyo buuraha quruxda badan waxaa lagu daboolay roogag ubax ah. Iyadoo aan loo eegin heerka jirdhiskaaga, waxaad heli doontaa waqti fiican sahaminta keydkan dabiiciga ah, mar haddii ay jiraan wadooyin kala duwan. Keydka dabiiciga ee Belluno ee Yurub wuxuu kufiican yahay bilowga iyo khabiiro khibrad leh.
Keydka dabiiciga ee Belluno wuu kayaryahay 3 safarka tareenka saacado ka yimaada Venice.
Dooxooyinka Hohe Tauern reserve reserve waxay ka buuxaan baraf qurux badan, qadiim ah iyo muuqaalka tuulada muuqaal dabiici ah, roogag ubax ah, iyo kaymo. Beertan dabiiciga ah ee yurub waxay hoy u tahay booqdayaasheeda iyo dadka nasiibka u leh ee ku nool gobollada ku xeeran. Khaas ahaan, Dabeecadda Dabeecadda Umbalfalle ee biyo-dhaca iyo webiga, halkaasoo aad ku arki doontid qaar ka mid ah biyo-dhacyada ugu layaabka badan in Europe.
Markaad dhex mushaaxdo kaydka dabiiciga ee cajiibka ah ee buuraha Alps ee Faransiiska, hubso inaad iska ilaaliso gorgorrada, stoats, willow grouse, iyo xayawaanno kale oo badan oo duurjoog ah oo gurigiisa ugu yeedha. Kaydkan cajiibka ah ee Alps-ka Yurub waa mid ka mid ah kuwa quruxda badan jardiinooyinka qaranka waxaad fursad u heli doontaa inaad ogaato.
Keydka dabiiciga ee cajiibka ah ee Saxon Switzerland wuxuu ka bilaabmayaa Jarmalka ilaa Czech Republic. Buuraha Elbe nuuradda leh iyo samayska caanka ah ee Pravcicka brana ee dhagaxa weyn ayaa horay u soo muuqday "Libaaxa, Saaxirad, iyo Wardrobe ”filimka. Keydkan dabiiciga ah ee neefta leh waa mid ka mid ah keydadka dabiiciga ee aan la ilaawi karin Yurub iyadoo leh aragtiyo badan oo saaxiibtinimo leh oo Instagram-ka ku yaal dusha sare ee canyon..
Safar maalinle ah waa waajib gebi ahaanba, iyo haddii aad qaadan karto dhowr maalmood, ka dib aad ayaa loogu talinayaa.
Waxay ku taalaa midigta dhexe ee udhaxeysa Spain iyo France, Ordesa iyo Mount Perdido waa mid ka mid ah keydadka dabiiciga ee ugu yaabka badan Yurub. Inkasta oo uu ku yaal dhinaca Faransiiska oo leh shir madaxeed 3,355 m. magaca Monte Perdido inta u dhaxeysa buurta ayaa magaceeda la helay maxaa yeelay kama aysan muuqan dhanka faransiiska ee xadka.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "5 Meelaha ugu Badan ee Lama Ilaawi Karo Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na…-reserves-europe/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)